कसरी लाग्यो बालमन्दिर निमावीमा आगो? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार कसरी लाग्यो बालमन्दिर निमावीमा आगो?
कसरी लाग्यो बालमन्दिर निमावीमा आगो?
२०७३, २५ फाल्गुन बुधबार २१:४७
सार्वजनिक विदा भएकाले दिनभर घरमै रहेका बेनी नगरपालीका–१४ डाँडाखेतस्थित बालमन्दिर निमावीका प्रअ तिर्थ बहादुर बानियाँले धुँवा देखिएपछि तत्कालै चापी लिएर विद्यालयमा पुगे । कार्यालयको कोठा खोल्दा विद्युत सर्ट भएको देखेपछि हतार–हतारमा विद्युत आपूर्ती बन्द गर्न खोज्दा आगो फैलिसकेको थियो ।
‘आगोको मुस्लो निस्किएको देखेपछि तत्कालै गाउँलेलाई खवर गर्नुभयो । विद्युत सर्ट भएर झिल्का निक्लिन थालेपछि मिटर अफ गर्न खोज्दा आगो फैलिसकेको थियो’ प्रअको भनाई उद्धित गदैं विद्यालयका शिक्षक रामप्रसाद शर्माले बेनीअनलाइनलाई भने । विद्यालय नजिक रहेको प्रअ बानियाँले देखेपछि विद्यालयमा पुगेपनि उनको प्रयास असफल भएसंगै विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक साम्रागी गरि करिव ६० लाखभन्दा धेरै क्षती भएको छ । धेरै समयपछि बर्षा भएकै दिन विद्यालयमा विद्युत सर्ट भएर १० वटा कोठामा आगलागीबाट क्षती भएको छ ।
विद्यालयमा आगलागीको खवर सुनेका सबै गाउँले विद्यालयमा पुग्दा आगोको मुस्लो निस्किएको थियो । डाँडाखेत र भिरमुनीका करिव ४ सयको हाराहारीमा जम्मा भएका गाउँलेले ज्यानको जोखिम मोलेर आयो नियन्त्रणको प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेनन्। काठ, ढुङ्गामाटोले बनेको दुई तले दश कोठे भवनका साथै फर्नीचर लगायतका भौतीक सामाग्री जलेर नष्ट भएको छ। आइतबार देखी अवरुद्ध भएको विद्युत सेवा बुधबार दिउँसो मर्मत पछि सूचारु भएको थियो । केही दिन विद्युत आपूर्ती बन्द हुनु र सुचारु भएकै दिन मौषममा समेत खरावी हुनु, ओभरलोडको समस्या लगाएतलाई आधार मान्ने हो भने विद्युत सर्टबाटै आगलागी भएको देखिन्छ ।
विद्युतमा देखिएको समस्याले विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक साम्रागीमा ठुलो क्षती पुगेको छ । पटकपटक ओभर भोल्टेजको समस्यामा पर्ने गरेका डाँडाखेतबासीले आफ्नै प्रयासबाट स्थापना भएको विद्यालयमा आगलागी भएपछि निरास भएका छन् । घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले समेत प्रारम्भीक क्षतीको विवरण संकलन गरेको छ । विद्यालयको भवन, पुस्तकालयको साम्रागी, कम्प्यूटर, कार्यालय र कक्षाका फर्निचर सहित करिव ९२ लाखको प्रारम्भीक क्षतीको विवरण संकलन गरेपनि बिहिबार थप अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।
Previous articleलुलाङका कृष्ण पुनको उपचारमा सहयोगको याचना
Next articleताकमबासीको आन्दोलन स्थगित, राजपत्रमा गाउँपालिकाको केन्द्र ताकम नभए आन्दोलन चर्किने